Ny Sakafo Manerantany · Global Voices teny Malagasy
Ny Sakafo Manerantany
MpanoratraMelissa De León
Voadika ny 13 Aogositra 2018 2:38 GMT
(Marihina fa tamin'ny 13 Febroary 2006 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Hanao tatitra avy any Nanegalito aho anio, tanàndehibe tsara tarehy any Andes Ekoadaoreana. Andeha hojerentsika raha ho hitanareo ao amin'ny sarintany izany! Hanao tatitra momba ireo zava-mahagaga hita ao amin'ny faritra isika amin'ny lahatsoratra manaraka, mampanantena aho.
Mitondra ity vaovao manaraka ity avy amin'ireo namana bilaogera mpankafy sakafo ny famintinana isan-kerinandro :
Avy any Londres, mizara ny nahandrony manokana rehefa hikarakara ny “Sakafo Nopotserina Malemy Tsara”. (purée) i Gastro Chick. Tsidiho ny bilaoginy ary fantaro izany tsiambaratelo izay navoakany ihany izany.
Efa nitsidika ny BlogHer ve ianao – izay ahitana ireo vehivavy bilaogera? Manana fizaran-tantara tena mavitrika izy ireo “Food & Drink” (Sakafo sy Zava-pisotro) izay hihaonan'ireo vehivavy mpanoratra bilaogin-tsakafo malaza sy izaran'izy ireo ny lahatsoratra nosoratany. Tsidiho fa mahafinaritra tokoa!
Manoratra momba ireo tari-dalana mahaliana indrindra miisa telo momba ny toeram-pisakafoanana ao Barcelona, ​​Tenerife ary Buenos Aires i Directo al Paladar avy any Espaina.
Manandrana ny karazana ‘artichaut‘ ary manomana ny salady miavaka i Gia-Gina avy any Italia.
Manazava ihany koa ny fomba fahandroana amin'ny bottarga izy, izay fantatra ihany koa ho ‘caviar‘ ho an'ny mahantra. Izany dia atodin'ny trondro lamatra nohamainina (tonno) na trondro mulet (muggine) nasiana sira ary nopotserina. Matsiro sy tsara tarehy ny nahandrony Spaghetti con Bottarga.
Ho an'ny fitiavana mofo: raha toa ianao vonona amin'ny “Mofo Masiatsiaka”, aza adinoina ny nahandron'i Naughty Curry amin'ny fanomanana ny Mofo Raketa Takariva.
Avy any Canada, mizara vaovao mahaliana vitsivitsy i Sour Patch : hamahana bilaogy i McDonald!